လေ့လာသုံးသပ်သူများက Keynote ပြီးနောက်ခြောက်ရက်အကြာတွင် Touch ID ကိုနှုတ်ဆက်ရန်ပြောကြသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုယူဆလာသည်နှင့်အမျှအိုင်ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းသည်အလွန်လျင်မြန်စွာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသည့်စနစ်တစ်ခုကိုနိဂုံးချုပ်စေနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မပါဝင်ဘဲဆန္ဒမဲပေးလိုသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုကြသည်။ အခြား Touch ID mode မဖြစ်နိုင်ပါ။ လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏သုံးသပ်ချက်အရနောက်ဆုံးပေါ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ iPhone 8 သည်ဒီနည်းပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပါလိမ့်မည်။
သို့သော် KGI အဖွဲ့သည်တင်ပြမှုမတိုင်မီလေးတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့သူတို့ဟာအများကြီးပိုစကားများကြပြီးသူတို့အစစ်အမှန်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုတောင်ပေးချင်ကြတယ် သူ၏ဟောကိန်းများကိုတရားမျှတစေရန် ... သင်သိလိုပါသလား။
အစပြုရန်စျေးနှုန်းသည်၎င်းကိုအတိအကျညှိနှိုင်း။ မရပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းအတွက်၎င်းတို့သည်လျင်မြန်စွာပြောနိုင်သည် Samsung မှ OLED panel များအားထိန်းချုပ်ရန်ဖိအားပေးမှုသည်အတော်အတန်အရေးကြီးသည် ထို့ကြောင့်တယ်လီဖုန်း။ ၎င်းသည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီညွတ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၊ Galaxy Note 8 ၏စျေးနှုန်းများကိုယူရို ၁၀၀၀ ကျော်အထက်တွင်ကိုင်တွယ်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်အံ့အားသင့်နေ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်နိုင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုမတိုင်မီရှိတော့မှာပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, KGI အဖွဲ့သည် Touch ID ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပန်းသီး၏မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း (နောက်ကျော) တွင်ပါ ၀ င်မှုလုံးဝကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ KGI ၏အဆိုအရ 3D Touch ၏ရှေ့ဖက်နှင့်နောက်ဖက်တွင်နေရာမရှိသလောက်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်ဖန်သားပြင်ရဲ့ဖိအားအာရုံခံကိရိယာဟာလက်ဗွေဖတ်စနစ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမအံ့သြသင့်ပါ။ စျေးနှုန်းအရ Apple သည် OLED panel တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ခန့်နှင့် LCD panel အတွက်အကြမ်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀ ကျသင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone အတွက် X ကို » လေ့လာသုံးသပ်သူများက Keynote အပြီးခြောက်ရက်အကြာတွင် Touch ID ကိုနုတ်ဆက်ကြသည်
နောက်တစ်နေ့တွင် Miguel Hernández၏ဝင်ပေါက်တွင် COD ကိုစတင်ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၉၀၀ ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါကယူရို ၁၁၉၉ ဖြင့်လောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။
တစ် ဦး ကတကယ့်မိုက်မဲ။ (သတင်း)
panel တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၂၀ ??? သင်တကယ်ကိုယုံသလား ?? ဒါကဖုန်းတစ်လုံးလုံးလုပ်ဖို့သူတို့အတွက်ကုန်ကျမှာပါ။ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာလူတွေကိုလူတွေဘယ်လိုလှည့်ဖြားရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာကစျေးကွက်ကွာဟမှုကိုခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းအရင်း (ကင်မရာ၊ စွမ်းဆောင်ရည် ... ) တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းအပြင်၊ ပိုနည်းတဲ့ frames တွေပါတဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်တယ်၊ ယူရို ၂၀၀ အတွက် Endless စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ၀ ယ်ယူထားပြီးဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာ၏အချို့ရှုထောင့်များကိုတိုးတက်အောင် VLC ကို update လုပ်သည်